तपाईं छोटो कपाल कचौरा हुनुहुन्छ र तपाईंको स्टाइलिश बाटोमा गर्व हुन्छ। तथापि, समयमा, ध्यान दिनुहोस् कि तपाइँ बढ्दो तरिकामा नयाँ तरिकामा हेर्न चाहानुहुन्छ। छोटो कपालको लागि एक ग्रीक केशले यो समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ। यस लेखमा हामी विभिन्न प्रकारका बाल प्रकारका लागि यस्तो केशको विकल्पहरू विचार गर्नेछौं।
ग्रीक कपाल बनाउने कसरी?
मोडेलको फोटो, जसको कपाल धेरै छोटो छ, भिजेलीले देखाउँछ कि सरल हेरफेर, साथै बाल र स्टाइलको लागि आधुनिक माध्यम चमत्कार गर्न सक्छ। ग्रीक शैलीमा तपाईंको छविको लागि उपयुक्त एक पाना छनौट गर्नुहोस् । तपाईं यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। रोमीस्टोन, ब्रोच, मोती, प्वाङ्ग र फूलको रूपमा गहना आकर्षक गहना, लोचदार ब्यान्डको टुक्रामा संलग्न हुन्छन्, कपाललाई मात्र अनियमित बनाउनेछ। र यहाँ कभर विकल्पहरू छन् जसमा यो सबै प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सरल संस्करणमा एक पछाडिको पछाडिको सानो कपालको लागि ग्रीक केशले निम्न कार्यहरू मान्छ: कपालको स्टाइल एक विशेष मोडलिङको साथ हेयर हेयर र दुर-ब्रेकिंगको साथ। त्यसपछि, टाउकोमा, लोचदार पछाडि धीरेमा राखिएको छ, र सम्पूर्ण कपाल लाकसँग तय गरिएको छ।
एक पट्टाले छोटो कपालको लागि अर्को ग्रीक केश जस्तै एक समान ढाँचा अनुसार बनाइएको छ, तर माथेको कपाल माथि हावा र लाक संग निश्चित छ। कपालको लागि अधिक चमकदार देखिन्छ, तपाईंले मुकुट र मुकुटमा आफ्नो कपाल बिस्तारै खानु पर्दछ। समाप्त बालहरू मिलाउन नबिर्सनुहोस्।
अर्को विकल्प - एक पट्टा संग छोटो कपाल को लागि एक ग्रीक केशिका "Lyrical गड" भनिन्छ। यस्तो सृजनात्मक छवि सिर्जना गर्न, यो आवश्यक छ, बलियो तयारीको मोडलको मद्दतको साथ, बालोंमा डराएको बालको प्रभाव सिर्जना गर्न र त्यसपछि पछाडि राख्नु।
एक रोमांटिक पट्टी, एक चोटी मा बहादुर कृत्रिम बाल बने, कुनै कपाल को सजाने को सजा देगा। केटाको लागि न केवल छोटो कपाल कर्टकट, तर छोटो स्क्वायर यस्तो लोचदार पछाडि राम्रोसँग देखिन्छ। यसलाई सही ढंगले लुगा लगाउनु, तपाईंले ड्रेसिङमा अतिपक्षीय क्षेत्रको कपाललाई सावधानीपूर्वक रिलीज गर्न आवश्यक छ। टोनमा कृत्रिम ढाँचाहरू आफ्नै कपालमा छान्नु पर्छ।
आफ्नो कपाल देखि एक चोटी कढाई - तपाईं छोटो कपालको लागि मूल ग्रीक केश पाउनुहुनेछ। पछाडि वा बिना बिना, केश मा एक विशेष यूनानी सिल्जेट प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण छ: तारको मात्रा र मुटुको पछाडीको मात्राको साथ थोरै अनियमितता।
कसरी राम्रो तरिकाले कपाल कट्टर बनाउनुहुन्छ, ताकि तपाइँ सुन्दर यूनानी केशियरिङहरू पाउनु हुन्छ?
कपालमा चोट लगाउनको लागि, तपाईंले यो अपरेशन सावधानीपूर्वक र प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक छ। ती बालबालिकाहरू को लागी सुझावहरू छोटो कपाल
कपाल सूखे र सफा हुन्छ।
नापको लागि सानो तार (लगभग3सेमी) अलग गर्नुहोस् - यो इष्टतम साइजको छोटो लम्बाइको साथ।
नक्सोस्वेभियाना को प्रक्रिया आफैलाई असहायमा राख्नु पर्छ जुन ठाडो रूपमा राखिएको छ।
ऊन को समयमा संयोजन को आंदोलनहरु परिपत्र वाला व्यक्ति जस्तै हुनुपर्छ। यसको मतलब छ कि झुण्डिएको स्ट्यान्डलाई थोडा अगाडी कङ्कलन को प्रभाव अन्तर्गत झुकाइएको छ।
यो ऊन संग बिस्तर मा जाने को लागि सिफारिश छैन र यसलाई हरेक दिन लाश संग तय।
कपाल स्क्रीनिंग "एस्टेले": समीक्षा र परिणाम
पतली कपालको लागि स्टाइलिश केशले थप भोल्युम सिर्जना गर्नेछ
"साइबेरिकाको प्रकृति", समुद्र-बोरथर्न शैम्पू: ग्राहक समीक्षाहरू
रङका रङ प्यालेट "रोवन"
तपाईंको कपाललाई इस्त्री गर्ने वा फलामलाई फ्याँकिएको कसरी गर्ने?
तपाईंको कपाल देखि रंग कसरी धोएर
आत्म-leveling फर्श को फाइदा के छ?
टेनिंग घरमा लुकाउँछ
Nikita Vysotsky - कान्छो छोरा Vladimira Vysotskogo
जीवविज्ञान Timiryazev को राज्य संग्रहालय। बच्चाहरु र वयस्क लागि वैज्ञानिक र मनोरञ्जन कार्यक्रम
वयस्क मा ठेउला। उपचार
मास्को रोपण र हेरविचार मा Weigel: प्रजाति र किसिमहरु
वजन "Sassi" को लागि पानी। समीक्षा, नुस्खा सिफारिसहरू
अनुतरदायी व्यवहार को खतराबाट के हुन्? व्यक्ति जिम्मेवार